u-Maharaj uthole ama-wicket abalulekile kumdlalo wakhe wokuqala e-Kingsmead
Keshav Maharaj of the Proteas celebrates the wicket of Shaun Marsh of Australia with Faf du Plessis of the Proteas during day 1 of the 1st Sunfoil Test match between South Africa and Australia at Sahara Stadium Kingsmead on March 01, 2018 in Durban, South Africa. (Photo by Lee Warren/Gallo Images)
u-Keshav Maharaj ujabulele umdlalo wakhe wokuqala we-Test edlala ekhaya ngokuthola ama-wicket ka-Steve Smith no-Shaun Marsh osukwini lokuqala lwe-Sunfoil Test Series phakathi kwama-Standard Bank Proteas ne-Australia e-Sahara Stadium Kingsmead ngoLwesine.
Ngesikhathi ukukhanya okubi kusheshe kwaqeda umdlalo, i-Australia ku-225/5 emuva kwama-overs angu-76 emuva kokuthi izivakashi zinqobe i-toss kwi-surface enhle, futhi ehamba kancane, umdlalo ubulingene.
Bekunokuphika okuncane ukuthi ama-Proteas ebengathanda ukuthola usuku oluphelele kuphela ukukhanya njengoba bebesalelwe ama-overs amane ukufinyelela ebholeni lesibili elisha futhi kusele i-wicket eyodwa ukufika kubadlali abaphansi be-Australia.
u-Maharaj ube ukhiye kwizinhlelo zama-Proteas emuva kokuthi ama-Proteas akhethe ukuqinisa ukushaya kwabo ngokufaka u-Theunis de Bruyn futhi bafake ama-specialist bowlers amane. Uhlelo beluhambelana kahle njengoba i-surface ivumele ukuthi u-Faf du Plessis amfake ngasekuqaleni kosuku futhi waphosa ama-overs amaningi kunabanye akade bephosa kuma-Proteas (2/69 kuma-overs angu-24).
Indima yakhe no-Vernon Philander, ophose kahle kanye nokuhlasela u-2/36 kuma-overs angu-17, kusho ukuthi ama-Australians ebengeke akwazi ukukora kalula ekuqaleni njengoba bethanda ukwenza.
Kube nama-partnership amabili ama-runs angu-56 – i-wicket yesithathu phakathi kwa-David Warner (51 off 79 balls, 6 fours) no-Smith (56 off 114 balls, 11 fours) ne-wicket yesine phakathi kwa-Smith no-Shaun Marsh (40 off 96 balls, 6 fours).
Kwabanye ama-Proteas kade ekhipha ngezikhathi ezihlukene kwaze kwathi u-Mitchell Marsh no-Tim Paine behlanganisa i-partnership yama-runs angu-48 nge-wicket yesithupha, kuyela esiphethweni.
Ama-Proteas ne-Australia balungiselela ukuqhubeka nempi yabo yekhilikithi u-Morkel uzothatha umhlalaphansi kwikhilikithi yamazwe emuva kwi-series ne-Australia Ama-Proteas angasabi afuna ukunqoba i-series u-Cummins uyaqhakaza ngokushaya kanye nokuphosa Isimo sama-Proteas alimele Ama-Proteas abheke ukudlala kangcono kumdlalo okumele bawunqobe Kuningi okudlalelwayo kwi-ODI yokugcina – u-Amla u-Sharma uhlelela i-India ukunqoba i-ODI series okungene emlandweni u-Kohli nama-wrist spinners bayaqhubeka nokucindezela ama-Proteas u-De Kock uphume amasonto amabili kuyela kwamane elimele isihlakala Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu